विद्यार्थीको शिक्षण अनुभव - Tanahun Awaj
Home समाचार	विद्यार्थीको शिक्षण अनुभव
विद्यार्थीको शिक्षण अनुभव
by Tanahu Awaj 25th March 2021 25th March 2021
25th March 2021 25th March 2021 22 views
म आशा मौरती देशकै प्रतिष्ठित  सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ । शिक्षा विषय लिएर अध्ययन गर्ने प्रत्येक विद्यार्थीले कक्षा १२ मा पढ्ने क्रममा केही समय प्रशिक्षार्थी शिक्षकको रुपमा  विभिन्न विद्यालयमा गएर शिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम फागुन पहिलो साता म र अन्य केही मेरा साथीहरु सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालय कमलबारी जानु पर्ने भयो ।
पहिलो दिन बसबाट कमलबारी झरेर विद्यालय तर्फ लाग्दै गर्दा म र मेरो टिममा सहभागी सबैको मनमा उत्साह अनि डर दुबै थियो । उत्साह यस कारण कि हामी सबै केही दिनका लागि नै भएपनि शिक्षक बन्दै थियौं । सधै शिक्षकको अगाडि बसेर छुकछुक गर्ने हामी अब शिक्षक बनेर छुकछुक गर्ने विद्यार्थीलाई सम्झाई बुझाई गर्दै पढाउनु थियो । शिक्षकका रुपमा हातमा मार्कर, आवश्यक शैक्षिक सामग्री र किताब बोकेर कक्षामा जाँदा र आफुले जानेका कुरा साना भाइबहिनीहरुलाई सिकाउँदा प्राप्त हुने सुखको अनुभूति छिट्टै गर्न पाउँदै थियौं हामीले । विद्यारुपि धन बाँड्नुमा सुख हुन्छ भनेर मेरा गुरुहरु भन्नु हुन्थ्यो तर हामीले अनुभूत गर्न पाएका थिएनौं । डर पनि
शिक्षकहरुको हाम्रा प्रति व्यवहार कस्तो हुने हो ? विद्यार्थीहरु सम्हाली नसक्नुका छन् र एक महिने शिक्षण अवधी पनि कहिले सकिएला जस्तो अत्यास लाग्दो हुने पो हो
कि ? के हामीले आफ्ना क्रियाकलाप सहज अगाडि बढाउन सकौंला ? यस्तै यस्तै मनमा उब्जेका प्रश्नहरुले मनमा डर भरेको थियो ।
उत्साह त बाँकी नै थियो विद्यालय पुग्दा तर शिक्षकहरुले गर्नु भएको मित्रवत व्यवहार र विद्यार्थीहरुको पनि त्यस्तै खाले व्यवहारले हामीमा भएको डर भाग्न बाध्य भयो । विद्यार्थीले मैले त जानिन मिस, यो सिकाइ दिनु न भन्दा मन उत्साहले भरिने रहेछ र अनायासै त्यो विद्यार्थी तर्फ पाइला बढ्दा रहेछन् । अनि आज पढाएको पाठ बुझ्यौ त भन्ने मेरो प्रश्नमा बुझ्यौ मिस भनेर त्यसपछि गरिने छोटा प्रश्नको उनीहरुले फटाफट उत्तर दिँदा मन पुलकित हुने रहेछ । यस्तो लाग्दो रहेछ, मैले संसार जित्ने योद्धा हुँ । तब न गुरुहरु विद्या धन बाँड्नुमा सुखको अनुभूति हुन्छ भन्नु हँदो रहेछ । विद्यार्थीहरुका अगणित जिज्ञासा शान्त पार्न गुरुहरुले गर्नुपर्ने परिश्रमको पनि मैले अनुमान लगाएँ, त्यही बेला ।
धेरै कुरा सिक्ने मौका पायौं हामीले त्यो छोटो
समयमा । शायद विद्यालयमा झण्डै १२ वर्ष विताउँदा सिक्न नसकेका र नपाएका कुरा सिक्यौं अनि अनुभूत गर्र्न पायौं ।
हामीले गर्नुपर्ने अतिरिक्त क्रियाकलापमा विद्यार्थीहरु उत्साहजन ढंगले सहभागी भए भने शिक्षकहरुले पनि आफ्नै कार्यक्रम सम्झेर सहयोग गर्नु भयो ।
कतिपय मानिसहरु भन्ने गर्छन, शिक्षक भनेका गाग्री हुन भने विद्यार्थी भनेका अम्खोरा हुन् । अर्थात गाग्रीले सधै अम्खोरालाई पानी दिन्छ र अम्खोरा भरिन्छ । गुरुले पनि विद्यार्थीलाई सधै ज्ञान दिन्छन्, विद्यार्थीबाट लिने भन्ने हुँदैन । तर होइन रहेछ । शिक्षण गर्नु भनेको त गाग्री हुनु मात्र होइन आम्खोरा बन्नु पनि रहेछ । हामीले केही विद्यार्थीहरुलाई सिकायौं तर धेरै उनीहरुबाट सिक्यौं । मलाई लाग्यो गाग्री भर्न आम्खोराले पनि पानी दिनु पर्ने रहेछ । गुरु हुन् उमेरले पाको नै हुनुपर्छ भन्ने होइन रहेछ । हुनपनि इष्र्या रहित निश्छल हाँसो हाँस्न अनि रिस राग धेरैैबेर मनमा नराख्न तथा सधै जिज्ञासु हुन हामीले साना नानीबाबुबाटै सिकेका हुन्छौं ।
विद्यार्थी शिक्षकको रुपमा सिद्धेश्वरी माविमा विताएका दिनहरु सिकाइलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका रहे । शिक्षकहरुले देखाउनु भएको सहयोगी भावले मलाई प्रभावित तुल्याएको छ भने विद्यार्थीहरुको सिकाईमा सक्रियताले पनि त्यत्तिकै प्रभावित भएकी छु । ममा सकारात्मक भावको सञ्चार गराउने विद्यालय परिवारको प्रगतिको कामना ।
प्रदेश लोकसेवा सदस्यमा तनहुँकी कल्पना
सम्झनामा गिरिजा बाबु
भानु १३ मा जु.रे.स दिवस
२६औैं बर्षमा शान्ति युवा क्लब
निर्मलालाई न्याय दिलाउन विरोध र्याली
अपाङ्गता जीविकोपार्जनका रेडक्रसद्वारा ऋषिङ्गमा तेह्रलाख सत्तरीहजार सहयोग
लायन्स क्लबको नेतृत्वमा भण्डारी
असक्षमलाई गिरिराज चल्ला
विकासका पूर्वाधार हाम्रै पालामाः पौडेल
छाब्दी प्रवेशद्वारको अध्यक्षमा गंगादेवी